Google AMP Cache URL Generator - IG
extension Ọnụ ọgụgụ ntanetị AMP IVW
edit_attributes Ọkwa nchedo data
Google-AMP-Cache-URL-Generator na- emepụta URL kwesịrị ekwesị na AMP-Cache-Format site na URL kwesịrị ekwesị nke ibe ọ bụla, nke weebụsaịtị ọ bụla.
- Biko chere -
- na ebe nrụọrụ weebụ na-enyocha -
Tinye URL nke oghere nchekwa AMP nke Google
Mee AMP cache url
Site na URL cache emepụtara, ụdị AMP nke webụsaịtị echekwara na cache AMP Google nwere ike ịkpọ Ọ BỤRị na Google edepụtara ibe ibe ya wee chekwaa ya na nchekwa Google.
Ụdị URL nke cache AMP
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, Google AMP Cache na-emepụta subdomain maka ibe AMP niile dị na otu ngalaba.
Nke mbu, a na-agbanwe ngalaba nke weebụsaịtị site na IDN (koodu inyinya) na UTF-8 . Ihe nkesa cache dochie:
onye obula - (mgbochi 1) site - (2 hyphens)
onye obula . (1 isi) site na - (1 mgbochi)
Ihe Nlereanya: amp-cloud.de ga-abụ
Ngalaba a gbanwere bụ adreesị nnabata nke Google AMP cache URL. Na usoro na-esote, a na-etinye URL zuru ezu cache, yana akụkụ ndị a gbakwunyere na adreesị onye ọbịa:
ihe ngosi nke na-edekọ ụdị faịlụ ahụ
a / c / maka faịlụ AMPHflix
a / i / maka onyonyo
a / r / maka Akara ókwú
ihe ngosi nke na-enyere aka ibufe site na TSL (https)
a / s / iji rụọ ọrụ
URL izizi nke weebụsaịtị ahụ na- enweghị atụmatụ HTTP
Ọmụmaatụ nke URL n'ụdị Google AMP Cache URL:
Nlereanya mbụ URL:
Chetara AMP cache url:
Kedu ihe bụ Google AMP cache?
Akụkụ nke osooso nke weebụsaịtị na usoro Google AMP bụ n'ihi nchekwa akpaka na nchekwa ihe nkesa nke ọchụchọ Google . Nke a pụtara na ebuputaghị ụdị AMP nke weebụsaịtị webụsaịtị weebụ, dị ka ọ na-adịkarị, mana ọ bụ site na nsonaazụ ọchụchọ nke ọchụchọ Google site na otu sava Google (ihe nkesa Google cache Google AMP) , nke na-abụkarị. enyere budata ngwa ngwa loading ugboro.
Nke a pụtara na ederede Google ma chekwaa ụdị nke ibe AMP na sava nke ya, n'okpuru ihe nchekwa ihe nchekwa AMP nwere onwe ya nke mebere dịka ụkpụrụ a kapịrị ọnụ. Site na URL a, na usoro AMP cache URL , ị nwere ike ịkpọ ma lelee nsụgharị AMPHflix ugbu a nke echekwara ugbu a na nchekwa AMP nke nyocha ọchụchọ Google. - Ozi ndị ọzọ gbasara ebe nchekwa Google AMP .